Uyisusa njani i-watermark kwifoto kunye nezi nkqubo | Iindaba zeGajethi
I-Intanethi igcwele imifanekiso, yiya nje kuGoogle ufumane imifanekiso yayo nantoni na esiyikhangelayo, simahla. Kodwa ezinye zezinto esizibona kwi-intanethi zinomniniyo, kwimeko yemifanekiso Kulula ukuqonda xa umnini eyithatha njengeyakhe, kuba loo mfanekiso uhlala unophawu. La manqaku ahlala elogo encinci kwikona apho umhleli wesithombe ayenza icace kwaye ayisiyongxaki, eshiya umxholo njengomntu ophambili.
Oku akusoloko kunjalo, ngamanye amaxesha sinokuyifumana le logo iphazanyisiwe kuwo wonke umfanekiso, esele ngasemva kodwa icacile. Yinto eqhelekileyo ukuba sijonga ukuba lo mfanekiso akufuneki usetyenziswe ngomnye umntu. Yinto ekufuneka ihlonitshwe kuba ibonisa ukuba umbhali wayo ngekhe onwabe kakhulu ukubona umfanekiso opapashwe ngomnye. Ngamanye amaxesha ziinkqubo zokuhlela ngokwazo okanye usetyenziso lwekhamera lwezinye iimobhayili ezishiya i-watermark yazo, sinokuyisusa ngokulula ngezinye iinkqubo okanye nangokusetyenziswa kwewebhu. Kule nqaku siza kubonisa indlela yokususa i-watermark kwisithombe.
1 Ngaba kusemthethweni ukususa i-watermark kwifoto?
2 Isususi seWatermark
3 Isitampu sefoto
Ngaba kusemthethweni ukususa i-watermark kwifoto?
Ukuba ifoto yeyakho yeyakho kwaye ujonge ukususa i-watermark efakwe kuwe yinkqubo okanye usetyenziso lwekhamera, kusemthethweni kwaphela. Ezi watermark ziphunyezwa ngabaphuhlisi bezi zicelo ngandlela thile betyhila ukufihla intengiso kwifoto nganye, into engafunekiyo kunye nencasa embi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uninzi lwezi watermark zinokususwa ngokucela useto lwezo zicelo.
Ukuba, ngokuchaseneyo, umfanekiso uvela kwi-intanethi kwaye i-watermark isuka kwindawo okanye umntu, sinokuyisusa loo watermark ukuba into esiyifunayo kukusebenzisa lo mfanekiso ngendlela yobuqu, kodwa ukuba into esiyifunayo kukuzuza ukuyisebenzisa, ukuba sinokuba nemicimbi yezomthetho, ukuba umbhali unqwenela njalo. Oko ukuthatha ifoto kunye nohlelo lwayo olulandelayo ngumsebenzi ekungafuneki wonke umntu awunike.
Nje ukuba silunyukiswe malunga neziphumo zomthetho ezinokubakho, siza kubona ukuba zeziphi iinkqubo esizisebenzisayo okanye zeziphi iiwebhusayithi esinokuzisebenzisa ukuphelisa ezo zinto zingathandekiyo nezingathandekiyo, nangona zilumkile, zonakalisa ifoto elungileyo.
Inkqubo efanelekileyo yalo msebenzi, ngaphandle kwamathandabuzo yiWatermark Remover. Inazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokucima okanye ukufiphaza zonke izinto zobugcisa esizifunayo emfanekisweni, ukusuka kwii-watermark ukuya kukungafezeki esingafuni ukukubona. Yenziwe ngendlela elula kakhulu, ke akukho mfuneko yokuba ube nolwazi oluphambili malunga nokuhlelwa kweefoto okanye iinkqubo.
Le nkqubo isimahla kwaye ayifuni naluphi na ufakelo, singena ngokulula kwiwebhu kwaye siqale, nantsi eminye imiyalelo yendlela yokwenza:
Sivula umfanekiso ngenkqubo kwi Msgstr "Iimpawu zemifanekiso".
Simakisha indawo apho uphawu lukhona okanye i-artifact esifuna ukuyisusa.
Sifumana kwaye ucofe ukhetho "Ngena kwi"
Ilungile, Siza kususa i-watermark yethu.
Enye inkqubo elungileyo kakhulu yalomsebenzi ngokungathandabuzekiyo Isisusi seSitampu seFoto, inkqubo elula ukuyisebenzisa nokuba asinabuchule kangako kwikhompyuter. Inkqubo yenzelwe ngokukodwa lo msebenzi, ke izixhobo esizifumanayo zokususa ii-watermark zihluke kakhulu kwaye ziyasebenza. Ngokungafaniyo nesicelo sangaphambili, le kufuneka ifakwe kwikhompyuter yethu, ke kuya kufuneka siyikhuphele ngaphambili. Siza kunika iinkcukacha ngokususa i-watermark ngamanyathelo ambalwa alula:
Sivula usetyenziso kwaye ucofe ku «Yongeza ifayile» ukukhetha ifoto esifuna ukuyihlela.
Nje ukuba umfanekiso ulayishwe, siya kwipaneli elungileyo yesicelo kwaye ucofe ukhetho "Okoxande" kwicandelo lezixhobo.
Ngoku ndedwa Kuya kufuneka sikhethe indawo apho ikhoyo i-watermark Ukuba sifuna ukuyiphelisa kwaye uxande oludlulayo luyakwenziwa lujikeleze umbala obomvu, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba le bhokisi iyomeleleyo, kuya kuba ngcono iziphumo.
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Ukususwa kwendlela" kwaye ucofe ukhetho "Ukupeyinta" yemenyu esiya kuyibona iboniswa.
Ngoku ngoku kufuneka ucofe ukhetho "Chukumisa" kwaye i-watermark iya kususwa ngokupheleleyo, iphelise uhlelo.
Ekugqibeleni ukugcina umfanekiso, cofa ku «Gcina njenge», ukhetho olwalukho kwimenyu ephambili yesicelo.
Njengoko sibona, ukususa i-watermark emfanekisweni kulula kakhulu kwaye ayifuni iinkqubo zokuhlela ezinzima, Ukuba unazo naziphi na iingcebiso ngezinye iindlela zokwenza lo msebenzi, siya konwaba ukuzifumana ngezimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyisusa njani i-watermark kwifoto kunye nezi nkqubo